Gbasara Anyị - Omita Lightig
Ekwentị: +86 18825896865
Projects & Akụkọ
Omita Lightig na Registered hụrụ 20million RMB hụrụ na 2009.
Dịka onye nrụpụta pụtara ìhè, onye nrụpụta na onye na-ebupụ ọwa ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ Edison, ngwaahịa na ọrụ anyị na-anabata ndị ahịa n'ụwa niile.
Anyị nwere abụọ ụlọ mmepụta ihe nke dị na Dongguan City na 6000M2 Factory ogbako, 2000M2 nkwakọba na 400M2 Showroom. Anyị nwekwara a ọkachamara otu si emebe, n'ichepụta na QC ịchịkwa, na Marketing na ahịa otu.
Maka ọkụ ọkụ, anyị na-elekwasị anya na ọkụ ele ọbịa nke ọma, nrụpụta maka ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ụlọ mmanya, alllọ Ahịa na ụlọ ndị ọzọ dị elu. kristal pendant chandelier, pendant ọkụ, n'ala oriọna, table oriọna na mgbidi sconces maka dị iche iche ime ụlọ na n'èzí ngwa.
Maka ọkụ ọkụ, anyị bụ ndị isi na-emepụta ihe eji achọ mma Edison bulbs, imerime ụdị ọhụụ ọhụụ maka isi ahịa dị iche iche, ọnụ ahịa dị mma maka azụmaahịa ka mma.Ọ dịịrị onye ọlụlụ mfe inweta uru na ngwaahịa anyị pụrụ iche. . Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị bọlbụ mmepụta bụ nnọọ nnukwu, anyị na a na-ịnọgide na-enwe nlezianya àgwà akara, na izute ahịa chọrọ na mgbanwe.
Maka ọkụ eriri, ọ bụ ngwaahịa na ngwaahịa iji nweta bulbs bulbs na-ere. Anyị nwere Ọgwụ na ịkpụzi igwe maka PC mkpuchi mmepụta. Anyị nwekwara ahịhịa na-agba agba na ụlọ ọrụ anyị.
Ngwaahịa na ọrụ anyị na-agbasawanye na mba 27, Europea na USA dị ka Isi Market, mana anyị nwekwara azụmahịa na mba ndị ahụ na-emepe emepe dị elu gụnyere Brazil, Chile na South Africa, Nigeria, Malaysia.
Imirikiti ngwaahịa anyị bụ CE Rohs asambodo, ma n'ezie nwekwara UL na SAA.
Na-ege ntị maka echiche dị iche iche sitere na ndị ahịa ụwa, na-agbaze ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ n'ụwa niile, na-adọrọ usoro ọfụma ikpeazụ dị ka o kwere mee, mana agbanweghị isi anyị -Ndị ịnụ ọkụ n'obi maka ihe emere nke ọma yana ngwaahịa dị ọnụ ala maka ọtụtụ ọha.
Na-aga na Lighting bụ naanị ihe anyị na-eme.
Imageslọ Ọrụ Ihe oyiyi
Ọ Gas Nchaji
Nnwale ule foto